I-Blackberry Messenger ye-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-BlackBerry Messenger kwi-Android? Yonke into inokwenzeka
Kuncinci i-RIM enokuyenza kunye nabakhuphiswano bayo abaphambili. Inkqubo yokusebenza yezixhobo zakho zeBlackBerry ayinakwenza nto ngokuchasene ne-Android. Nangona kukho into iBlackBerry OS inayo i-Android engenayo: iBlackBerry Messenger.
Kwaye kukuba le nkonzo yemiyalezo ethunyelwa ngeyona ndlela inamandla yeyona ilungileyo ikhona. Kodwa izinto ziza kutshintsha. Okanye ubuncinci yile nto esenza ukuba siqonde ifoto eqala eli nqaku, eyenza icace gca ukuba I-BlackBerry Messenger iya kwenza i-Android.
Umfanekiso ucebisa okubonakala ngathi yi Inguqulelo ye-beta yeBlackBerry Messenger eqhuba kwi-Android smartphone. Eyona nto inomdla kukuba ifonti esetyenziswa kwinkonzo yeBlackBerry Messenger, eqhelekileyo kwizixhobo zeBlackBerry.
Asazi ukuba yinyani okanye ngumfanekiso wokwenyani, kodwa ukuba ekugqibeleni I-RIM yenza umtsi kwi-Android Ndicinga ukuba iya kuba yenye yezona zinto zihamba phambili kwinkampani yaseCanada. I-RIM ikwizibuko kwaye indalo yonke ye-Android inkulu kakhulu. Izibonelelo zemali ezinokukuzisela le nkonzo zinokubakhohlakele.
Kuya kufuneka silinde ingxelo esemthethweni ye-RIM yokuqinisekisa ukuba iBlackBerry Messenger iza kuhlala kwi-Android, kodwa iyandinika ukuba kungekudala siza kuyifumana. Ngaba ucinga ukuba licebo elilungileyo okanye iBlackBerry iya kuphulukana nomtsalane wayo ngale ntshukumo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-BlackBerry Messenger kwi-Android? Yonke into inokwenzeka
Izimvo ezi-28, shiya ezakho
Sele lixesha okoko kwavela lo mfanekiso. Kwaye i-RIM yaphuma yayikhanyela le marhe kuba ukuba bayishiya i-BBM ivuleleke kwezinye iinkampani ezinje nge-Android okanye iApple iOS, bayokungabinamali ngokuqhwanyaza kweliso.
Ngaphandle kwento yokuba kubonakala ngathi i-BB10 entsha iza nayo yonke into ithathe ithuba lokhuseleko oluchaza i-BB kunye ne-BBM yayo ngokudityaniswa kwezicelo ... Ngaphandle komdlali we-android ongakhangeleki kakubi osebenzisa konke iiapps ababhekisi kuzo abafuna ukuzixhumela ku .
Ukuqukumbela oku kwakukuhle ngexesha lawo kodwa yayikukuva kuphela.
UJosue Aristy sitsho
Ndicinga ukuba umhla ophuma kwi-android, i-RIM iya kugqiba ukwahlukana!
Abantu basebenzisa i-BB kuphela kwi-BB Messenger!
Phendula kuJosue Aristy
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba i-samsung galaxy s2 4g epic touch iyakufumana i-ICS ??????????????
Ndiza kuthi ndiyathandabuza kakhulu ukuba oku kuyakwenzeka.
Ithebhulethi ye-Android sitsho
Ndicinga ukuba iBlackberry iye ezantsi ngokwaneleyo ukuba ilahle ekuphela kwento eyahlulahlula phakathi kwezinye.
Phendula kwiThebhulethi ye-Android
UToni Lambada sitsho
ngokuchasene noko. izibonelelo ziya kuba zenkohlakalo xa iitheminali zazo zibonelela ngezibonelelo ezifanayo nokhuphiswano, ngelixa zise-RIM
Phendula kuToni Lambada
Ndicinga ukuba i-RIM iya kutshona kuba abasebenzisi abaninzi abayilahli iBlackBerry ye-BBM; Nangona kunjalo, iRIM inokufumana imali eninzi xa ihlawulisa inkampani ye-ANDROID ngamalungelo okuboleka usetyenziso lweBBM yayo…. Likrele elintlangothi-mbini…
hahahaha i-RIM iyalalanisa kwaye iyavumelana ne-ANDROID iphulukana neblackberry, ithambo liya kufana, kutheni i-android inyuka kakubi kwaye ngubani ongafuniyo u-android 😀 kunye ne-blackberry? hahahaha .. ithambo ndicela iRIM neAndroid ... iblackberry kunye nenkampani yakhe isizungu xd hehehe
njengoko c ukhuphelo ??
Ndingathanda ukwazi ukuba ungandinceda ukuyikhuphela kwi-android yam, undinceda njani nceda
Ndifuna le nkqubo
Ndicinga ithemba bueniiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ndiyathemba ewe kuba ii-BBs ngabantu abangalunganga bazithengela i-bbm kuphela kodwa ukuba baya kwi-android i-BBOS iyakuphela kwaye i-android inyuke iye kwi-IOS ephezulu yokufudusa abantu ndiyathemba njalo kuba wonke umntu une-BBM kwaye ndiyayitshisa i-BB
Ndifuna ukwazi ukuba sele ikhona kunye nomhlohli ukuyikhuphela yah
Ndinombuzo, umbuzo ngulo: ukuba bazokumilisela i-blackberry messenger ye-android, iyakuba sele befika kwivenkile ye-Android okanye beza kwiiselfowuni ze-android ezilandelayo, ngaba umntu othile undixelela ukuba yeyiphi kwezi ???
Ndicinga ukuba ngumbono ogqwesileyo kuba siyabazi abaninzi ukuba siyothuswa yi-bb kwaye ukuba siyazithenga yi-x bbm kuphela emva koko ukuba ne-bbm kwi-uff ye-Android yintoni inzuzo enkulu ngokubhekisele kwilahleko ye-bb mmmmmmm ibisele iyinto elula iselfowuni ngakumbi njengaye Nawuphi na umntu, ndicinga ukuba kwiisimboli60 iya kuba ligalelo elihle
Sele ikhona nezinye izicelo ezingasebenziyo kuphela nge-BB kodwa nge-iPhone phakathi kwezinye, i-WhatsApp, kodwa ayizukuba ngumbono ombi ukuba i-BB ifudusele i-BBM yayo iye kwi-Android, nokuba ndiyithengisile bendiya kuyithenga kuba wonke umntu uyazi kwabo bane-BB ye-Messenger kwaye ayikho enye into, kwaye ngokobuqu ndiyanuka okwethutyana elidlulileyo !! Enkosi ku-Android ngazo zonke iindlela ezikhoyo, ndinokukhetha kwiimodeli ezininzi ezine-OS efanayo, kodwa nge-BB kunye ne-iPhone zimbalwa kakhulu iinketho! Ngendlela endine-iPhone 4 kwaye andiyisebenzisi, ukumamela nje umculo !!
Ndiyifuna nge-xd yam Android
IMontemar Caldera sitsho
Ngokoluvo lwam, eli ingangumbono olungileyo ukuba iRIM isungule i-BBM ye-Android, kodwa, inkampani yeRIM iya kuphulukana nabasebenzisi kuba i-Android inentsebenzo engcono kunye nokusetyenziswa kwaye xa sisazi ukumiliselwa, abasebenzisi beRIM bayakwehla kabukhali
Isiphelo: I-Android iphumelele kwaye i-RIM ilahlekile
Phendula uMontemar Caldera
UCristian Aguirre sitsho
Inyani yile, ndicinga ukuba baya kunyuka ngenxa yokuba bonke abantu abane-android ne-BBM baya kuqala ukuthenga iiphakeji zencoko kunye nezixhobo ze-BB ukuba iya kunciphisa ipesenti yokuthenga kodwa iya kubachaphazela ngakumbi ngeephakeji zencoko, umhlobo weblackberry, ukuba Ndiyakuqinisekisa ngenxalenye yam ukuba ndinayo i-Xperia kunye nenyani ukuba iyaphuma ndingazithenga iiphakheji zencoko yomhlobo kwenye
Phendula Cristian Aguirre
UMaria Jose sitsho
Kulungile ngombono wam licebo elililo ngokuqinisekileyo iblackberry iyonakala kodwa cinga ngononophelo ngale nto ukuba iblackberry ibine-androi kunye noAndre babene-bbm bobabini abaphumeleleyo kwaye abayi kungabinamali bathenge iblackberry inayo yonke into ebandakanyiweyo ithenge i-androi nayo yonke into ibandakanywe ngendlela efanayo . 🙂
Phendula kumaria jose
I-Samsung Galaxy Tab 2 7.0 " sitsho
Ndicinga ukuba inkampani iblackberry iya phantsi. Ayinakuthelekiswa nenkqubo yokusebenza ye-android. Olona hlobo kuphela kweeblackberry zokungahambi pike kukuthengisa inkqubo kwinkampani ye-android ukuze ufumane imali yokutyala kwakhona ekwenzeni i-OS engcono.
Phendula kwi-Samsung Galaxy Tab 2 7.0 "
Le ta 1, icompay
Ndikunye nawe, umnyele we-samsung, iblackberry, ekuphela kwento enayo sisikhonkwane kunye nokusetyenziswa okukhoyo, ukuba iyapakisha, i-android yeyona ilungileyo
inyani ngoku ukuba iblackberry ikhuphe imveliso yayo yamva nje, ukuze ibenokhuphiswano kunye ne-iphone kunye nesamsung, ikwenzile oko kuba uninzi lwazo ngoku isamsung kunye ne-iphone zazinxulumene kakhulu ne-bbmsn kwaye ngoku izakufumaneka kula maqonga, izakwenza ukuba ithandwe kakhulu phakathi kwezicelo, andazi ngawe kodwa ndicinga ukuba izakuyinceda inkampani ngandlela thile, ndiyacinga.
Phambi kwaba somashishini singama-pelabolas kwaye baya kuyazi ukuba mabenze ntoni kwaye yeyiphi eyona ilungele bona kuqala kunye nabasebenzisi bokugqibela hehe
UJuan Manuel sitsho
Ndinefowuni ye-android kwaye ndingathanda ukuyikhuphela i-bbm pin
Phendula u-juan manuel
USony uqaphela ukusilela kwezinye izikrini zeSony Xperia S yayo